एमाओवादी कास्कीका उम्मेदवार पौडेलको प्रचार गाडीमा आगजानी - NewsPolar NewsPolar
एमाओवादी कास्कीका उम्मेदवार पौडेलको प्रचार गाडीमा आगजानी
६ कार्तिक २०७०, बुधबार ०२:२८
कास्की, ६ कार्तिक । कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का एमाओवादी उम्मेदवार विष्णु पौडेलले चुनाव प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गर्नुभएको गाडीमा आज अज्ञात समुहले आगजनि गरेको छ ।
चुनाव प्रचारप्रसारको क्रममा सिद्ध गाविस पुग्नुभएको उम्मदेवार पौडेलले प्रयोग गर्नुभएको ग. १ च ५१४३ नम्बरको बोलेरो जिपमाथि अज्ञात समुहले आगजनी गरेको हो ।
अज्ञात समुहले विहान करिब ४ : १५ बजेतिर सिद्ध गाविसको वडा न. ६ स्थित निवुवा स्वाँरामा पार्किङ गरेर राखेको जिप आगजनी गरेको हो । आगजनीबाट जिप जलेर ध्वस्त भएको छ । जिप सहित प्रचार सामग्रीहरु समेत जलेर नष्ट भएका छन् ।
घट्नापछि प्रतिकृया दिँदै पौडेलले देशव्यापी रुपमा एकीकृत माओवादीको लहर देखेपछि चुनावमा पराजित हुने डरले यस्तो हतकण्डा अपनाएको बताउनु भयो । उहाँले घटनाको निस्पक्ष छानविन गर्न माग गर्नुभएको रेडियो गण्डकी पोखराले जनाएको छ ।
प्रदेश नं १ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल समाप्त